2019 #NAB शो - दिन2लपेटो-अप - NAB प्रसारण बीट द्वारा समाचार देखाउनुहोस्, सरकारी प्रसारणकर्ता NAB शो - NAB शो लाइभ
घर » 2019 NAB देखाउनुहोस् » 2019 #NAB शो - दिन2लपेटो अप
#GALSNGEAR जीवित हुनुहुन्छ! मा हेर्नुहोस् nabshow.com or broadcastbeat.com । @NABShow #NABShow
आज हाम्रो पहिलो शोको लागि आजको भयानक भीड छ #GalsNGear's @brandbuzz र @adryenn होस्टिंग! #NABShow @NABShow - लास वेगास कन्वेंशन सेन्टरमा
नमस्कार!2को DAY 2019 मा स्वागत छ NAB देखाउनुहोस्! हामी यसमा छौं AGAIN - जब तपाईँले भीड नियन्त्रण नियन्त्रणबाट देख्न सक्नुहुन्छ, हामी फिल्डको रूपमा फिट छ र जान तयार छौं! हामीले आजको लागि स्टोरमा धेरै मिलायौं, त्यसैले ब्लगमा रहनुहोस् र हेर्नुहोस् के कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गर्न के हो! आज हामी धेरै रोचक मानिसहरू भेट्यौं, र आज धेरै भेट्टाउन धेरै रोचक व्यक्तिहरू छन्! त्यसोभए फिर्ता बस्नुहोस्, आराम करो, र ड्राइभिङ्ग गरौं! के त्यो सिङ मैले सुनेको थिए? 🙂 ओह - यो दिनको हाम्रो पहिलो कार्यक्रम !!!
वरिष्ठ सेल्स विशेषज्ञ विशेषज्ञ केन्की आर्यबाट सिक्नु, सिनेमाको बारेमा; एलेक्स, लेंस, र अपग्रेडहरू, धेरै सुन्दर!
@Tbcconsoles मा @NABShow मा अधिक पेशेवर स्टूडियो को लागि उद्योग को फर्नीचर #NABShow
यो मान्छे @tbcconsoles साँच्चै मदतकारी छन् तपाईंको स्टुडियो फर्नीचर अर्को स्तरको लागि प्राप्त गर्न #NABShow
यो तालिकाहरू @tbcconsoles मा खराब गधा हुन् त्यहाँ वास्तवमा यसलाई वर्णन गर्न कुनै अन्य तरिका हो! @NABShow #NABShow
@HitachiGlobal आज देखि जॉन हेम्रेरी देखि कुरा गर्न को लागि मिल्यो! उहाँले हामीलाई SK-HD1800, नयाँ सानो 4K क्यामेरा, र डिजिटल नियन्त्रण प्यानल जस्ता केही राम्रो नयाँ उत्पादनहरू देखाउनुभयो! #NABShow
सिगमा बूथ मा 😬 @Sigma_Photo @NABShow #NABShow
सीईओ क्रिस स्टेन संग फ्लेक्स भाडा समाधान मा! हामीले यो अचम्मको बारेमा सबै कुरा सिक्ने मौका पाएका छौं; गोदाम व्यवस्थापन, मोबाइल एप्स, र RDID 😎 फ्लेक्स सबै बारेमा स्क्यानिङ कम छ, र अधिक गर्दैछ! बूथ C11547 #NABShow @NABShow
ईभ्रो फील्ड सल्युसनसँग बिहानको मनोरञ्जन। वरिष्ठ बिक्री विशेषज्ञ, एल्विस लुनसँग म्यानफोटोको लागि समर्थन आधार बारे कुरा गर्दै, अधिक प्रयोग र अपग्रेडको अनुमति दिन्छ! 😎 बूथ C11249 #NABShow @NABShow
उनीहरूको2नयाँ उत्पादनहरूको बारेमा @SmallHD सँग कुराकानी गर्न प्राप्त भयो, 702 टचस्क्रिन मनिटर! #NABShow
उनीहरूको2नयाँ उत्पादनहरू, सिइन7टचस्क्रिन मनिटरको बारेमा @SmallHD सँग च्याट गर्न चाहन्थे! #NABShow
प्रसारण बिट सम्पादक-इन-चीफ @ryansalazar @BeasleyMedia र NAB संयुक्त बोर्ड चेयर, @CarolineBeasl15 को @NABShow लाइभ सेट मा सीईओ संग बस्छ। #NABShow - लास वेगास कन्वेंशन सेन्टरमा
अब हामी आकारको लागि किम हचिचिनन, खाता व्यवस्थापक उत्तर अमेरिकाको साक्षात्कार गर्दै छौं। तिनीहरू यहाँ छन् चीजहरू केवल अविश्वसनीय छ! बूथ C8215 #NABShow @NABShow
यस्तो शांत प्रविधि उनीहरूले @BroadcastDepot मा विशेषता गर्दै छन् !! तिनीहरू Sodyo अनुप्रयोग प्रयोग गरी स्क्यानिङ प्रविधिको अर्को पीढी प्रदर्शन गर्दै छन्। #NABShow @NABShow
@SecureData @NABShow मा सुरू गर्दै #NABShow
अति उत्तम उद्योग प्रकाश मा @Zylight @NABShow #NABShow
हाम्रो टीम हरू ब्रैडीको @VitecGroup को साथ @AutoscriptTV टेलीस्प्रोमिंग उपकरण को बारे मा चैट गर्दै छन्।
@ TVUNetworks सँग उनीहरूको नयाँ TVU को बारेमा कुरा गरियो 4K / 60fps लाई पठाउँदछ। यो पोर्टेबल ट्रांसमीटर एकाइ हो जुन 60fps मा एन्कोड गर्दछ, सेल्युलर मोडेम को समर्थन गर्दछ, उपग्रह, माइक्रोवेव, ईथरनेट, र वाईफाई। #NABShow @NABShow
वर्तमानमा माइकल अकर्डी साक्षात्कार गर्दै, राष्ट्रपतिको लागि CueScript। हामी आफ्नो उत्पादनको प्रभावको बारेमा सिकिरहेका छौं, र उद्योगमा शब्दहरूको साथ यो तरिका हो, र SMTE 2110 बूथ C2622 @CueScript_ को बारेमा #NABShow @NABShow
हामी सबै स्थापित र अर्को साक्षात्कारको लागि तयार छौं! छुनुहोस् ट्विन: Plex ले आफ्नो Lav Lavarer र हेडसेट माइक्रोफोन संग हाम्रो बिहान गर्मी गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन! #NABShow @NABShow
हाम्रो साक्षात्कारकर्ता अहिले वरिष्ठ उत्पाद प्रबन्धकसँग छ माइक्रोफोन ग्लोबल उत्पाद व्यवस्थापनका लागी छुनुहोस् ट्विन: पक्स जॉन जन्मे, जसले हामीलाई सबै विवरणहरू र तपाइँका सबै जवाफहरू सुन्नु भएको छ! @shure बूथ C6015 #NABShow @NABShow
लाइभ स्ट्रिम प्रसारणको लागि उनीहरूको भयानक जूम क्यामेराहरूको बारेमा @ptzoptics को साथ पकड्दै! #NABShow @NABShow
धेरै राम्रो उपकरण at Canare @NABShow #NABShow
यो सबै समाचार प्रसारणको लागी मोबाइल व्यानमा छ! @NABShow #NABShow
@Litegear @NABShow मा अधिक नयाँ उत्पादहरूको बारेमा ठूलो कुराकानी
@Clearcomsystem मा उनीहरूको नयाँ उत्पादन जस्तै LQ श्रृंखला र फ्री स्पीक द्वितीय अन्तर्क्रिया प्रणालीको बारेमा कुरा गर्दै!
व्यावसायिक मोबाइल सम्पादन LumaTouch हामी सबै अद्भुत छ! टेरी मोर्गन सह-संस्थापक, डिजाइन र सह-संस्थापक, ईन्जिनियरिङ् क्रिस डेमिरासले हामीलाई आफ्नो उत्पादनमा परिचय दिएका थिए, मोबाइल सम्पादन र सहकार्यको लागि हाम्रो जुनून को खिलाडिदिए। त्यसो भएन #NABShow @NABShow
हाम्रो चालक दल @TVLogicUSA मार्फत उनीहरूको नयाँ उत्पादनहरू जस्तै F-7H mk2, सर्वोच्च7"पूर्वनिर्धारित टच कुञ्जीसँग फिल्ड मनिटरको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुभयो! #NABShow @NABShow
@ को साथ ठूलो कुराकानीबहुडीएन @NABShow #NABShow
हाम्रो टीम स्मिथ होल्यान्ड, म्याकिसबल्डर को अध्यक्ष बूथ C2056 मा छ र त्यो हाम्रो प्रयोगकर्ता डिजाइन कस्टम कस्टम फोम को बारे मा सबै केहि साझा गर्न को लागी अधिक खुश छ! तिनीहरू हाम्रो उपकरणको आवश्यकता पूरा गर्ने बारेमा सबै छन्! 还। #NABShow @NABShow
अति उत्तम केबल क्यामेरा टेक्नोलोजी उच्च नजर @NABShow मा #NABShow
प्रसारण बीट दिन2को ट्रयाकहरूमा लिए #NABShow। हामी मोनोरेल पाम ल्याउन ट्रांजिटमा भीडसँग बोल्ने मौका पार्यौं।
प्रसारण बिट चलचित्र क्रान्तिको दृश्य जादूको पछि #NABShow
"हामी घमन्ड गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दै छौ, हामी हाम्रा ग्राहकहरू देखाउने प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं कि हामी उनीहरूको हेरचाह गर्छौं र उनीहरूको सेवा गर्छौं" जोसेस मारिया न्यर्गा बाट @Fluotec जो प्रकाश उत्पादनहरू को उत्पादन को वर्ष को लागि @NABShow द्वारा नामांकित गरिएको छ। #NABShow
कोइप्ट ओप्टिक्स अध्यक्ष लेसे जलन, आफ्नो उत्कृष्ट उत्पादन संग हाम्रो दिमाग बाहिर उडेको छ। तिनीहरू manufacturering मेटाडेटा, र पूर्ण फ्रेम सेंसर कवरेज भएको छ। तिनीहरूको लक्ष्य सबै उद्योगको प्रत्येक आवश्यकता पूरा गर्ने बारेमा छ #NABShow @NABShow
आफ्नो नयाँ उत्पादनको बारेमा @Dielectric_LLC मा कुरा गर्दै, आरएफएचकेकीई, ट्राफिक लाइनको लागि एक निगरानी प्रणाली। #NABShow @NABShow
@NcamTech सँग क्याप्चर प्राप्त भयो जो क्यामेरा ट्र्याकिङमा विशेषज्ञ छ। तिनीहरू उनीहरूको नयाँ उत्पादन, चरम, एक क्यामेरा क्यामेरा पट्टी देखाउँदैछन्। #NABShow @NABShow
एकचोटि हाम्रो टीमको राम्रो समय छ! यस अवसरमा स्कार्होज एपीएस बूथ सीएक्सएनमक्समा सीईओ कास्पर सखोझोजसँग, उनीहरूको विश्वव्यापी प्रसारण नियन्त्रकहरू बारे सिक्दै। अहिलेसम्म धेरै राम्रो छ #NABShow @NABShow
सह संस्थापकको साथमा बस्दै @omniscientech प्रविधि बारे बोल्ने
@Outsight को साथ च्याटिंग Global Aka क्रीम स्रोत, उनको नयाँ उत्पाद को बारे मा, SpaceX, जो पारंपरिक शीर्ष प्रकाश मा मोड़ संग एक एलईडी अन्तरिक्ष प्रकाश हो! #NABShow @NABShow
ब्याट्री प्याकहरू @coreswx @NABShow मा अधिक #NABShow
FiLMiCInc संस्थापक र सीईओ नील बर्माम र उत्पाद प्रबन्धक एलियट फिट्टोरो संग गोल्ड स्टैंडर्ड को लागि गोल्ड स्टैंडर्ड को उनको नवीनतम संस्करण को लागी दिलचस्प छ, र उनको स्टैंडअलोन अडियो रिकर्डर 😎 बूथ C12439 #NABShow @NABShow
पत्ता लगाउनुहोस् कसरी कसरी प्रसारण र डिजिटल को लागि सामाजिक र गतिशील एकीकरण को प्रयोग गरेर वास्तविक समय सगाई को ड्राइव गर्नुहोस! #NABShow @NABShow
@Servervision @NABShow को साथ बिन्दुमा तपाईंको विषयलाई ट्र्याक गरेर राख्नुहोस् #NABShow
हाम्रो टीम ओमनेट मा बूथ C12139 मा यसलाई माया गर्दै छ। हामी स्तिफन नेफ संग कुरा गरिरहेका छौं, हामी आफ्नो उत्कृष्ट रोमांचक पावर साहसिक मार्फत हिंड्दै राष्ट्रिय खाता प्रबन्धक। चार्जको संघर्ष समाप्त गर्न निमन्त्रणा! उनीहरूको आदर्श वाक्य "पावर सबैकुनै पनि!" 😎 #NABShow @NABShow
बजारमा सेट सबैभन्दा सानो तिपाई @platypodtripods @NABShow #NABShow
@Studio_Suite को साक्षात्कार हाम्रो टोली, एक स्टूडियो व्यवस्थापन सफ्टवेयर जसले सम्पर्कको हरेक बिन्दुलाई सँभाल्छ! #NABShow @NABShow
एबी एबीटी संग AJA भिडियो प्रणालीहरू रयान सेलजारसँग कुराकानीको बारेमा #NABShow। निचो साउथ हॉलमा उनीहरूको उत्कृष्ट बूथको जाँच गर्नुहोस्!
@Netmediacorp777 @NABShow को साथ गम्भीर कुरा गर्दै #NABShow
उद्योग अन्तर्दृष्टि @NABShow मा अधिक #NABShow
बर्ड डगसँग, जसले उनीहरूको मुख्य मार्केटिङ अफिस इमोन ड्रूको माध्यमबाट एनडीआईको संसारमा स्वागत गर्दछ। 2016 पछि उनीहरूले एक स्पष्ट मिशन गरेका छन्: कार्यप्रवाह समस्याहरू समाधान गर्न, पैसा बचत गर्दा! 4K एन्कोर्डर र Decorders समावेश गर्न उनीहरूको दायरा विस्तार! 😎 #NABShow @NABShow
बूथ C6934 मा डीटीसी संग जेपी डेलपोर्ट, उपराष्ट्रपति, डीटीसी को लागि प्रसारण बिक्री को साक्षात्कार गर्दै छन् जो हाम्रो बारे मा बता रहेको छ कि कसरि उनि प्रसारण बजार को लागि किनारा प्रौद्योगिकी को विकास को विकास गर्दै छन्। र CineVue लाई। अक्सिस एसएसके सोनी 4K UHD, HDR पुरा तरिकाले एकीकृत वायरलेस क्यामेरा समाधान।
सैम विल्स, क्यामेरा र रङ ईन्जिनियर, हामिलाई FilmConvert मा परिचय गर्दै छ। रंग ग्रेडिंग बारे जान्न धेरै! आफ्नो उत्पादनको बारेमा पागल रोचक सामान! बूथ C3359 #NABShow @NABShow
यो एक अद्भुत स्थान मा हुन सक्छ! नेशनल एसोसिएशन प्रबन्धक प्रोफेशनल भिडीयो डिभिजन मिडिया सेवा सेन्टर क्रेग यान्गीको साथ जेवीसीमा आफूलाई इन्साफ गर्दै। H HEVC, क्यामेरा, इन्कोडिङ, र वायरलेस लाइभ स्ट्रिमिङको बारेमा ठूलो कुरा हो #NABShow @NABShow
बिक्री प्रबन्धक, एरिक चान्ग संग PILOTFLY मा स्थिर बल को बारे मा सबै को सुनवाई। हामीसँग साझेदारी गर्दै कसले PILOTFLY सबै कुरा सम्भव छ, फरक पार्दैछ! क्यामेराको सामान यात्रा यात्राको लागि शूटिंग बनाउन र बनाइयो! #NABShow @NABShow
तिनीहरू फिल्म उद्योगमा भन्छन् - CUT! प्रिन्ट !!! यो एक लपेटा हो, सबै ... दिन2आधिकारिक रूपमा "गर्न सक्छ," यति बोल्ने! फेरि, मलाई यो हाम्रो समर्पित चालक दललाई छान्न चाहन्छु ... एक पटक फेरि, तिनीहरूले exquisitely प्रदर्शन गरे र मेरो अपेक्षा भन्दा बाहिर! यद्यपि, कुनै पनि सम्भव भएन यदि यो तपाईंको लागि होइन, वफादार एनएबी प्रशंसक जो शो मा भाग लिनु र यो सबै सम्भव बनाउनुहोस्! त्यसैले, मैले कल भने जस्तै, NOW सबैको पक्ष र अन्य सामाजिक घटनाहरूलाई हिसाब गर्ने समय हो - तपाईं VEGAS मा हुनुहुन्छ! तपार्इको समय राम्रो रहोस!!! हामी भोलि फर्किनेछौं MORE 2019 सँग NAB देखाउनुहोस् कवरेज! तबसम्म - ब्लगमा-इन रहनुहोस्!
2019 2019 NAB 2019 NAB देखाउनुहोस् 2019 NAB सम्मेलन देखाउनुहोस् 2019 NAB पार्टीहरू देखाउनुहोस् 2019 NAB पार्टी सूची देखाउनुहोस् 2019 NAB पार्टी पार्टीहरू देखाउनुहोस् प्रसारण बीट पत्रिका प्रसारण ईन्जिनियर प्रसारण ईन्जिनियरिङ् प्रसारणकर्ता सम्मेलन प्रसारण सम्मेलन H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC लुक्न isovideo JCT-VC NAB देखाउनुहोस् नब देखाउने क्यारियरहरू NAB लस भेगास देखाउनुहोस् NAB शो पंजीकरण NAB2019 nabshow प्रसारणकर्ताहरूको राष्ट्रिय एसोसिएशन आवाज कमी UHD / 4K / HD	2019-04-09
अघिल्लो: Vislink टेक्नोलॉजीज र ग्रास घाटी 4K स्पेस मा साझेदारी बढाउनुहोस्
अर्को: MTI फिलिम डेमो को लागि नयाँ स्वचालित डस्ट हटान उपकरण को लागि DRS ™ नोवा मा NAB